Nagu saabsan - Taizhou Newkye Electronics Co., Ltd.
Noqo lamaanaha iswada ee caalamiga ah ee lagu kalsoonaan karo!
NEWKYE hadafkeenu waa inaan NEWKYE caan ka dhigno aduunka oo dhan. U hogaansanaanta falsafadda shirkadaha ee ah "Diirad Gaarka ah oo Diirad Leh", iyo iyada oo lala kaashanayo shirkadaha caanka ah iyo la-hawlgalayaasha farsamada ee gudaha iyo dibedda, waxaan u keennay dakhliyo badan macaamiisha inta lagu gudajiray iskaashiga muddada-dheer, waxaanan ka caawinnay inay ku guuleystaan ​​guulo badan xilligii macluumaadka. , iyadoo hal-abuurnimadeena waara ee tikniyoolajiyadda iyo maaraynta.
Tan iyo markii aasaaskeedii, CUSUB ku adkeysos on Ujeedada hal-abuurnimo, dhaqso iyo waxqabad leh si loo hagaajiyo tartanka ganacsiga. Anagawada shaqeyn badan shirkadaha ka kala yimid dalal kala duwan oo adduunka ah dhowr sano oo dadaal ah .
Kuweena alaabooyinka waxaa ka mid ah Mashiinka adeegga, motor stepper, motor stepper loop xiran, Howlsocodsiinta mashiinka, darawalka, kontoroolka CNC, inverter iwm Waxaan u sameynaa xalal otomaatig ah oo dhameystiran macaamiisha waxaanan ka caawinnaa inay xakameyaan qiimaha, hagaajiyaan qiimaha shirkadaha. waxay si joogto ah u ballaarisay aagagga ay khuseyso oo horumartay. Sababtoo ah waxqabadka wanaagsan iyo qiimaha macquulka ah, alaabada NEWKYE ayaa si ballaaran loogu isticmaalay noocyo kala duwan oo ka mid ah beeraha otomaatiga warshadaha. sida: Lathe, Mashiinka axdi qarameedka CNC, Xarunta mashiinka, Mashiinka xardho,Dhacaot, Mashiinka xirxira, Mashiinka dharka, Dmashiinka ispensing, Pbiyo raacis, Mashiinka goynta Plasma, Lmashiinka goynta aser iyo Mweydii sameynta mashiinka, iwm
Takhasus gaar ah: Bixi alaab kaamil ah adiga oo ku takhasusay waxa aan ku fiicanahay!
Diirad Saar: Ku qanci macaamiisha adoo si dulqaad leh u dhageysanaya ra'yigooda iyo dalabkooda!
Diirad Saaray: Samee tabo cusub si joogto ah adoo si kal iyo laab ah ugu hiilinaya wax soo saarka R&D!
Daacadnimo: nuxurka qiyamka; Hal-abuurnimo: nafta qiyamka; Pragmatism: xukunka qiyamka
Lasoco tayo aad ufiican, kabax baahida macaamiisha.
220 Volt Ac Howlsocodsiinta Motor, Gawaarida Stepper Hybrid, Ac Stepper Motor, Xidhan Loop Stepper Motor Driver, Howlsocodsiiyaha gawaarida gawaarida, 6 Wire Stepper Motor,